काठमाडौंबासीहरु नै झस्किनेगरी बालेनले जारी गरे यस्तो सूचना, झनै पलायो आशा ! – Annapurna Post News
काठमाडौंबासीहरु नै झस्किनेगरी बालेनले जारी गरे यस्तो सूचना, झनै पलायो आशा !
June 23, 2022 sujaLeaveaComment on काठमाडौंबासीहरु नै झस्किनेगरी बालेनले जारी गरे यस्तो सूचना, झनै पलायो आशा !
काठमाडौं । काठमाडौंबासीहरु नै झस्किनेगरी मेयर बालेन साहको नेतृत्वले साउन १ देखि कडा नियम लागू गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा मिसाउनेलाई साउन १ गतेदेखि कारबाहीको डण्डा चलाउने भएको हो ।
रवि लामिछाने कसैबाट संचालित हुनसक्छन्ः हरिशरण लामिछाने
१२ अर्ब चाहिन्छ बञ्चरेडाँडाको माग पूरा गर्न , तयार छ फोहोर व्यवस्थापनको वैज्ञानिक योजना , बालेनले बढाउलान् अघि
काठमाडौंमा बालेन शाहले लगाए कडा नियम